Ukusetshenziswa kwe-Enfuvirtide ku-HIV, umthamo, umphumela wecala kanye nezixwayiso - I-Shangke Chemical
Ukusetshenziswa kwe-Enfuvirtide ku-HIV, umthamo, imiphumela eseceleni nasezixwayisweni
1. Yini i-Enfuvirtide?
2. Indlela yokusebenza ye-Enfuvirtide?
3. Ukusetshenziswa kwe-Enfuvirtide ku-HIV
4. Ungayisebenzisa kanjani i-enfuvirtide powder?
5. Umuthi we-Enfuvirtide?
6. Iyini imiphumela emibi ye-enfuvirtide?
7. Kufanele igcinwe kanjani i-enfuvirtide powder?
8. Ucwaningo olwengeziwe nokusetshenziswa kwe-Enfuvirtide powder
I-Enfuvirtide (159519-65-0) luhlobo lwe-peptide elisetshenziswa ezweni lezokwelapha ukuvikela i-virus yokugonywa komuntu (i-HIV) ekuthelelekeni amaseli akho anempilo angakhuthaza imiphumela yesifo emzimbeni wakho. I-Enfuvirtide noma i-T-20 ithengiswa ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba ngaphansi kwegama lomkhiqizo elithi Fuzeon. Kodwa-ke, ngokuya ngokuthi uvelaphi, ungathola ukuthengisa kwe-enfuvirtide ngaphansi kwegama lomkhiqizo ohlukile, kepha konke kusebenza injongo efanayo.
I-Enfuvirtide powder (159519-65-0) isetshenziswa kanye neminye imishanguzo yokwelapha i-HIV, okuyigciwane elibhekele ukutholwa kwegciwane lesifo i-HIV (ingculaza). Kufanele futhi uqaphele ukuthi i-Enfuvirtide ayelapheki i-HIV, kodwa iyasiza ekwehliseni umthelela wayo kanye nemiphumela yakho emzimbeni wakho. Abantu abathatha lo mkhiqizo baphila impilo enhle nenempilo njengoba amaseli abo evikelwe kwigciwane. Ngokusho kocwaningo, igciwane lesandulela ngculaza lithelelezela amaseli amhlophe emzimbeni wakho abhekene nokulwa nezifo. Yikho-ke, ezimeni eziningi, iziguli ze-HIV / AIDS zithola amazinga aphansi okugonywa. Noma kunjalo, i-Enfuvirtide iyasiza ekuvikeleni amaseli akho anempilo kunoma yikuphi ukulimala, ngaleyo ndlela kuthuthukisa isimo sakho sempilo.
I-Enfuvirtide acetate inciphisa inani le-HIV emzimbeni wakho, esiza ekuqiniseni amasosha akho omzimba. Umkhiqizo usiza ukwehlisa amathuba wokuthola izingqinamba ze-HIV ezifana nezifo ezihlasela kakhulu iziguli ze-HIV. Njengoba uthatha eminye imishanguzo ye-HIV / AIDS, kuwumqondo omuhle njalo ukuhambisana nabo ne-Enfuvirtide ngoba kusiza umuthi ukuthi usebenze kangcono futhi uthuthukise ukusebenza kwawo ngempumelelo.
I-Enfuvirtide iyatholakala kumapulatifomu ahlukene kepha kufanele ithengiswe ngaphansi kwemiyalelo kadokotela. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala ukuthatha lo mkhiqizo, qiniseka ukuthi uya kohlolwa udokotela, futhi uthola umthamo ofanele kudokotela wakho. I-Enfuvirtide acetate iyatholakala ku-inthanethi, futhi ungenza i-oda lakho kusuka ekunethezekeni kwendlu yakho noma kwehhovisi. Noma kunjalo, cwaninga okufanelekile ukuze uqonde umenzi nomhlinzeki ngaphambi kokwenza i-oda lakho. Intengo ye-enfuvirtide ingahluka ngokuya ngomthengisi. Kunezinto eziningi zokwenza okungezizo emakethe ezingalimaza isimo sakho. Uma ungaqiniseki ngokuthi uwuthola kuphi umuthi, khuluma nodokotela wakho ukuze uthole usizo olwengeziwe.
Njengoba kushiwo ngaphambili, Umjovo we-Enfuvirtide umuthi osetshenziswa ekwelapheni igciwane lesifo somzimba sokugomela abantu (i-HIV). Igciwane alikhulisi noma liphindaphindeke lodwa, ngakho-ke, lihlasela amaseli omzimba ukuze lisebenzise imetabolism yalo. I-HIV ihlasela kakhulu amaseli amasosha omzimba akho abizwa ngokuthi ama-CD4 T-assist lymphocyte noma amaseli amhlophe egazi. Amangqamuzana asebenza ngokulwa nanoma yikuphi ukutheleleka, ezama ukungena ohlelweni lomzimba wakho. Ngenkathi yokuphindaphinda, i-HIV ibulala amaseli we-CD4 T-assist, futhi ngenxa yalokho, umzimba wakho uba buthaka, okwenza ungakwazi ukulwa nanoma yiziphi izifo ezilandelayo. Lokho kusho ukuthi uzongenwa yizifo eziningi ozovezwa ngenxa yokuthi umzimba wakho awukwazi ukuzilwisa.
Indlela yokusebenza ye-Enfuvirtide iqinisekisa ukuthi amaseli akho e-CD4 avikelekile ekuhlaselweni yi-HIV. Umkhiqizo ubopha kumaprotheni azungeze leli gciwane, owusiza ukuba uzinamathele kumaseli we-CD4. Lapho i-enfuvirtide inamathele kula maprotheni, ivimbela i-HIV ukuthi ihambisane nolwelwesi lweseli lwe-CD4 yakho. Qaphela ukuthi, i-HIV ingakwazi ukuphindaphinda futhi ikhuphuke lapho izinto zayo zofuzo zingena kumaseli akho e-CD4. Ngakho-ke, i-enfuvirtide ibuye iqinisekise ukuthi leli gciwane alizalisi futhi likhule ngamanani.
Lokhu Indlela yokusebenza ye-Enfuvirtide yehlukile kuyo yonke eminye imishanguzo yegciwane lengculazi emakethe, esilwa kuphela naleli gciwane ngemuva kokuthi selingenise amaseli akho e-CD4. Ngakho-ke i-Enfuvirtide HIV ingenye yemithi enamandla kakhulu yokulwa ne-HIV futhi ingasetshenziswa ukulwa nokukhula kwegciwane lapho selingasakwazi ukumelana neminye imishanguzo. Kodwa-ke, usengathatha i-Enfuvirtide eyedwa noma uyenze ukukhetha kwakho kokuqala, futhi izoletha imiphumela oyifunayo. Kuze kube manje, alikho ikhambi elaziwa nge-HIV, kepha nge-enfuvirtide, ungaqiniseka ukwehlisa inani legciwane emzimbeni wakho futhi wehlise ijubane lokuthuthuka kwanoma yikuphi ukugula okubangelwa ukutheleleka nge-HIV / AIDS.
Ochwepheshe batusa ukuthi uphuze i-enfuvirtide powder kanye neminye imithi elwa ne-HIV ehlasela leli gciwane ngezindlela ezahlukahlukene. Ukungeza i-peptide powder ekwelashweni okukhona kungaba wumqondo omuhle, ikakhulukazi uma ukutheleleka sekungamelana nemithi. Lo mkhiqizo kuthiwa ungomunye wemithi enamandla kakhulu yokulwa negciwane lengculazi, kanti futhi selunqunywe kakhulu ezigulini ebezphuza eminye imishanguzo ngaphandle kokuthola ukuphuculwa. Kungaphakanyiswa futhi kubantu abangabekezeleli eminye imiyalo ye-HIV.
I-Fuzeon iqukethe i-enfuvirtide powder njengezinto ezisebenzayo, ezenza umuthi ofanele wokulwa ne-HIV emzimbeni wakho. UFozeon ungowesigaba semithi eyaziwa ngokuthi yi-fusion inhibitor. Izakhi zokwelapha ezikuleli qembu ezifana neFuzeon, zivimba igciwane le-HIV ekutheni ziqukane namaseli e-CD4 futhi ekugcineni ziwavimbe ekuphindaphindeni nasekukhuleni ngenani. I-peptide powder isetshenziswa ndawonye nezinye izidakamizwa ezilwa ne-HIV ukuthola imiphumela engcono. Njengoba kushiwo ngenhla, i-enfuvirtide isebenza ngokubopha ngamaphrotheni enza kube lula ukuthi i-HIV ihambisane ne-CD4.
Lesi senzo senza ukuthi kungenzeki ukuthi leli gciwane lingene kumaseli amhlophe egazini futhi lithinte amasosha akho omzimba. Ezimweni eziningi, i-enfuvirtide acetate ibekelwa abantu abaphuza eminye imithi, futhi leli gciwane liye lakhula lingamelana neminye imithi ebekiwe. Xoxa nodokotela wakho ukuthola eminye imininingwane yokuthi ungawusebenzisa kanjani ngempumelelo lo mkhiqizo.
Ngaphambi kokuqala ukuthatha lo muthi, qiniseka ukuthi ufunda imiyalo yokusebenzisa yomenzi we-enfuvirtide ephepheni elingaphakathi kwephakethe. Imihlahlandlela izokunikeza imininingwane eminingi yokuthi ungawuphatha kanjani umkhiqizo. Abanye Abahlinzeki be-Enfuvirtide izokunikeza eminye yemiphumela emibi ye-enfuvirtide ukuze wazi ukuthi ungafinyelela nini kudokotela wakho. Futhi bakunikeza ngezexwayiso ze-enfuvirtide ukuze uphephe lapho uthatha into.
I-Enfuvirtide ingumkhiqizo womjovo, ngokungafani neminye imishanguzo elwa negciwane lengculazi ephuza ngomlomo. Le peptide powder inamamolekyuli amakhulu angahle achotshozwe ohlelweni lwakho lomzimba lapho ethathwa ngomlomo futhi ehluleka ukuletha imiphumela oyifunayo. Nge-peptide powder, qiniseka ukuthi uthola ukulungiswa okulungile noma vumela udokotela wakho akwenzele. Kodwa-ke, udokotela wakho angakuqeqesha ukuthi ungalungisa kanjani i-enfuvirtide powder nge-solvent ngaphambi kokufaka umjovo we-enfuvirtide.
Landela zonke izinyathelo zokulungiselela kahle lapho ulungiselela i-enfuvirtide powder. I-powder kufanele ixutshaniswe namanzi oyinyumba futhi ihlole isixazululo ngokubukeka ukuze isixazululo sixube ngokuphelele ngaphambi kokufaka umjovo.
Qala ngokususa isicaphucaphu esivela kumthamo wamanzi oyinyumba wokujova.
Sula i-vial ngayinye nge-swab oyinyumba engaboli bese uyishiya isikhashana ukuze izihloko zome komoya.
Sebenzisa isirinji enkulu ye-3ML bese udonsa i-plunger uyibuyisele kumamaki ayi-1ml, bese ufaka umoya emoyeni ovulekile oyicanse wamanzi.
Faka manje inaliti yesirinji oyinyumba ku-vial ngokusebenzisa isikhungo sokumisa.
Faka isirinji namanzi angcolile kwi-Fuzeon vial engela.
Ngokulandelayo hlaba amanzi angenazintsholongwane, futhi uqiniseke ukuthi kwehla kancane kancane ku-Fuzeon powder.
Musa ukusikaza i-vial kepha sebenzisa umunwe wakho ukuze uthephe imizuzu engaba yishumi ukuze uchithe.
Lapho iqala ukuncibilika, ibeke eceleni ukuze uyiqede ngokuphelele engathatha cishe imizuzu engama-45.
Lapho kuxutshwe ngokuphelele, isixazululo kufanele singabi nombala, sicace, ngaphandle kwamabhamu, uma isixazululo sigcotshwa, sinikeze isikhathi esithe xaxa sokuzichitha ngaphambi kokuzijova. Lapho isixazululo seluxazululiwe futhi kucacile ukuthi usungaphatha umthamo. Ungathathi umthamo uma ubona noma yiziphi izinhlayiya noma ngaphambi kokuthi ikhambi licace ngokuphelele.
Umthamo ojwayelekile kubantu abadala yi-90ml ngosuku okufanele uphuzwe kabili ngosuku. Umjovo kufanele uphathwe engalweni yakho engenhla noma engxenyeni ephezulu yethanga lakho. Uma unikeza ingane umkhiqizo, udokotela wakho uzokutshela isilinganiso esifanele nokuthi umfaka kangaki umjovo. Kungcono ukuthi ujikeleze izindawo zomjovo ukuze uzinikeze isikhathi sokuphola. Futhi, yazisa udokotela wakho uma uphuza eminye imishanguzo yesifo ngaphambi kokuqala ukuthatha i-enfuvirtide.
I-Enfuvirtide kufanele sithathwe yinoma yisiphi isiguli se-HIV / AIDS ukuze sikhuthaze amasosha omzimba njengoba sivimba igciwane ekuhlanganiseni namaseli e-CD4 futhi liwavimbele ekuphindaphindeni. Umthamo, noma kunjalo, uhlukile ezinganeni nakubantu abadala. I-Enfuvirtide synthesis idlala indima enkulu ekulweni negciwane lesandulela ngculaza eye yathuthukisa ukumelana neminye imithi elwa ne-HIV.
Umthamo wabantu abadala abancishisiwe we-enfuvirtide we-HIV yi-90mg ngosuku okufanele ihlukaniswe ngemithamo emibili. Kufanele uphathe umjovo yize ithanga lingaphandle, ingalo ephezulu noma isisu.
Umthamo wezingane weminyaka engu-6 kuya kwengu-16 ubudala, ungama-2mg ngekhilogremu, kanti umthamo kufanele uphathwe kabili ngosuku. Umthamo ophelele wezingane okule minyaka ubakaki ungama-90mg ngosuku. Ezinganeni ezineminyaka eyi-17 nangaphezulu umthamo onconyiwe ngu-90 mg ngosuku futhi kufanele futhi uhlukaniswe ngemithamo emibili nsuku zonke.
Uphuthelwe umuthi we-Enfuvirtide?
Uma kwenzeka ukhohlwa ukuphuza umthamo wakho we-HIV we-enfuvirtide, uthathe ngokushesha, uyakhumbula. Kodwa-ke, ungangeqa umthamo uma sekuyisikhathi somthamo olandelayo. Musa ukusebenzisa umthamo owengeziwe ukwenza lowo olahlekile; kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu. Futhi, khumbula ukuthola umuthi wakho olandelayo ngesikhathi ngaphambi kokuba umuthi uphele ngokuphelele.
Ngaphezulu komthamo we-Enfuvirtide?
Uma kwenzeka noma ikuphi ukweqa ngokweqile funa ukunakekelwa kwezokwelashwa ngokushesha ngoba kungakuveza emiphumeleni emibi kakhulu.
Lapho uthatha i-enfuvirtide acetate ungayifaki eduze kwedolo lakho, indololondo, inkaba noma amabhuzu. Gwema futhi ukujova umthamo ube yizibazi, imvukuzane, izilonda noma noma iyiphi indawo yesikhumba engaphilile. Ukuthatha i-enfuvirtide akukuvimbeli ekusakazeni lesi sifo, ngakho-ke hlala uvikele ubulili, gwema ukwaba izinto ezibukhali kanye nesixubho sakho. Gcina yonke imiyalo yemithamo ukuze ujabulele izinzuzo ezinkulu. Ngeminye imininingwane, khuluma nodokotela wakho ukuqondise ngezindlela ezahlukahlukene zokuvimbela ukudluliselwa kwe-HIV.
I-HIV ye-Enfuvirtide njenganoma imuphi omunye umuthi ungakudalula nemiphumela emibi eyehlukene ngokuya ngokuthi umuthi uzokwenzenjani ngohlelo lwakho lomzimba. Kwesinye isikhathi imiphumela emibi ye-enfuvirtide ingenxa yokusebenzisa ngokweqile noma ukusetshenziswa kabi. Kodwa-ke, kuneminye imiphumela emibi esejwayelekile cishe kubo bonke abasebenzisi be-enfuvirtide. Isitoreji esimpofu se-enfuvirtide nakho kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu. Ezinye ezejwayelekile Imiphumela emibi ye-Enfuvirtide faka;
Imithambo yokudla, isicanucanu, isifo sohudo nokuqunjelwa
Izinhlungu, ukuvuvukala noma ukucasuka ezindaweni zomjovo
Ubuthakathaka bemisipha nobuhlungu
Finyelela kudokotela wakho ngokushesha uthola imiphumela emibi elandelayo;
Ukuvuvukala entanyeni noma umphimbo wakho, ukungabi namandla noma ukuguquka kokuya esikhathini
Izimpawu zokutheleleka okusha okufana nokuqubuka kwezindlala, ukugoqa noma izilonda ezibandayo.
Igazi emcimbini wakho
Imiphumela emibi ye-enfuvirtide ingahluka ukusuka komunye umuntu komunye futhi ngenxa yalokho, ungathathi noma iyiphi yawo. Yazisa udokotela wakho uma imiphumela emibi ejwayelekile ingashabalali ngemuva kwesikhathi esithile. Ukuze uphephe lapho uthatha lo mkhiqizo, gcina yonke imiyalo yemithamo enikezwe udokotela wakho.
I-Enfuvirtide powder (159519-65-0) abakhiqizi bahlala bekhombisa ukuthi kufanele uwugcine kanjani umkhiqizo lapho uwusebenzisa nokuthi ungawubeka kanjani. I-pousi ethosiwe engafakwanga i-enfuvirtide powder ekushiseni kwamagumbi angaba ngu-20 kuya ku-25 degrees Celsius. Kodwa-ke, uma ungakwazi ukugcina emazingeni okushisa asekamelweni, ungawagcina eqandisiwe cishe ama-Celsius angaba ngu-2 kuya ku-8. Futhi, gcina amanzi angenasici endaweni yokushisa yegumbi ngaso sonke isikhathi.
Lapho usuxubile isixazululo se-enfuvirtide sigcine esiqandisini ku-2 kuya ku-8 degrees Celsius. Isixazululo se-enfuvirtide exubile kufanele sithathwe kungakapheli amahora angama-24. Musa ukusebenzisa into ngemuva kokuthi isiphelelwe yisikhathi futhi futhi ungayithengi lapho uphawu lwekhithi luphukile noma ilahlekile. Ngemuva kokusebenzisa i-enfuvirtide powder, landela imihlahlandlela ye-FDA yokuthi uyilahla kanjani ikhithi kanye nemithi engasetshenziswanga.
Lapho uthenga i-enfuvirtide powder kusuka kubahlinzeki abahlukahlukene, qiniseka ukuthi wenza ucwaningo olufanele ukuze uqinisekise ukuthi uthola umkhiqizo osezingeni elizokuqinisekisa imiphumela emihle. Yize igama lomkhiqizo i-enfuvirtide igama elithi Fuzeon lilo elijwayelekile emakethe, ungathola futhi umkhiqizo othengiswa ngaphansi kwegama lomkhiqizo ohlukile. Baningi abahlinzeki be-enfuvirtide emakethe, futhi kufanele uhlale ufuna okungcono kakhulu. The Amanani we-Enfuvirtide Ungahlukahluka kusukela komunye kubathengisi kuya komunye, ungayisebenzisi njengento ebalulekile lapho ukhetha umthengisi ofanele.
Konke kukho konke, kunesidingo sokuqhubeka nezifundo zokwelapha nokucwaninga ukuthola okunye ukusetshenziswa kwe-enfuvirtide nokusetshenziswa kwaso. Njengomkhiqizo womjovo ojwayelekile, abasebenzisi abaningi bavuse ukukhathazeka, futhi izifundo ezengeziwe zingasiza ekwakheni umthamo womlomo we-enfuvirtide. Ngenye indlela, into ingaqhakanjiswa ukuze ingene ijovwe kanye noma kabili ngenyanga. Okwamanje, i-enfuvirtide ihlala ingumjovo futhi onamandla wokulwa ne-HIV. Zizwe ukhululekile ukukhuluma nodokotela wakho nge-enfuvirtide ne-gp41.
UZhu, X., Zhu, Y., Ye, S., Wang, Q., Xu, W., Su, S.,… & Zhang, T. (2015). Izakhiwo ezithuthukisiwe zamakhemikhali nezakhiwo ze-HIV fusion inhibitor AP3 ngaphezulu kwe-enfuvirtide: ukuqokomisa izinzuzo zecebo lokufakelwa kwephaphu. Imibiko yesayensi, 5, 13028.
UBlanco, JL, noMartinez-Picado, uJ. (2012). Ama-virus wokuhlanganisa i-HIV ezigulini ezinolwazi nge-ART. Umbono Wamanje kwi-HIV ne-AIDS, 7(5), i-415-421.
I-Chowdhury, S., & Roy, PK (2016). Imodeli yezibalo ye-enfuvirtide ne-proteinase inhibitors njengokwelashwa okuhlanganisiwe kwe-HIV. I-International Journal ye-nonlinear Science kanye ne-Numerical Simulation, 17(6), i-259-275.